Chrome OS 83 inosvika ichibvumidza kutumidza iwo madhizaiti chaiwo | Linux Vakapindwa muropa
Sezvakarongwa, Google yakadarika vhezheni 82 yeiyo Chrome. Vhiki rapfuura yakakanda Chrome 83, vhezheni yebrowser yako yakaitika kune v81, uye maawa mashoma apfuura akakanda Chrome OS 83, iyo nyowani vhezheni yako yekushandisa system iyo inouya zvakare mushure v81. Uku kuvhurika kwakaitika anopfuura mwedzi miviri nehafu mushure mekutanga uye kwakauya nezvakakosha maficha, senge kugona kweboka rewebhu webhu.
Chrome OS 83 yaifanirwa kunge yakaburitswa mazuva mashoma apfuura, asi zvinogara zvichitaurwa kuti hazvina kunonoka kana mufaro wacho wakanaka. Uye zvakare, tichifunga kuti ivo vakasvetuka vhezheni nekuda kwedambudziko re COVID-19, hachisi chokwadi chakakomba zvakadaro. Nhau dzakanaka ndedzekuti kumirira kwave kuchikosha uye iyi vhezheni inounza shanduko dzinovandudza zvakanyanya ruzivo rwevashandisi. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva izvo zvinouya neshanduro iyi.
1 Zvakakwirisa zve Chrome OS 83
2 Kuvhura kuri pamutemo, munguva pfupi pane ese maChannelbook
Zvakakwirisa zve Chrome OS 83
Mhedzisiro yekupa mazita echokwadi madhesiki.
Iye zvino unogona kuona password kana PIN panguva yekupinda.
New Media Sessions yeMubatsiri (Google Assistant). Izvi zvichatibvumira kudzora multimedia playback nezwi redu.
Sarudzo nyowani inotibvumidza kushandisa Google yeMhuri paChannelbook.
Kusanganisira iro basa rekurongedza matabhu kuita mapoka mune iyo Chrome browser. Ichi chimiro chinotaurwa mune yepamutemo Chrome OS 83 kuburitswa chiziviso, asi ichiri kudikanwa kuve inogoneswa mu chrome: // flags / # tab-mapoka. Vangangodaro vagadzire iyo ficha kune wese munhu ari kure mumazuva mashoma anotevera kana zvisina kudaro isu tichafanirwa kumirira v84 yeanoshanda system.
MuARC ++, nzira dzeku cache mafaera eAPK emaapplication akaiswa anowedzerwa.
Yakawedzera kuvimbika kweiyo Android application yekuisa paChannel OS nekumisikidza iyo yekuvandudza yezvikamu zveGoogle Play.
Ikozvino inoratidza ziviso inotinyevera kuti kutangazve kunokosha kana uchiisa vhezheni itsva yeanoshanda system.
Iyo hint system yave kuwanikwa yekushandisa skrini yekuratidzira kudzora chishandiso muhwendefa modhi.
Muchikamu cheDhivha / Simba remagetsi sisitimu inofarira, marongero akapatsanurwa izvozvi arongedzerwa kuchinjira kumagetsi ekuchengetedza maitiro paunenge uchibatanidza chishandiso kunetiweki uye nekunze kushanda.
Zvikamu zveMultimedia mumaneja wefaira izvo zvinobvumidza kuwana nekukurumidza kune akasiyana zvikamu zvezvinhu zvichangowedzerwa zvemultimedia zvemukati zvave kuwanikwa pamidziyo yese.
Kuvhura kuri pamutemo, munguva pfupi pane ese maChannelbook
Kuburitswa kwe Chrome OS 83 zviri pamutemo kwemaawa angangoita makumi maviri nemana, asi Google inoda kuburitsa shanduro nyowani yesoftware zvishoma nezvishoma. Kana iyo isati yaonekwa pane yako Chromebook, ichaita chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS 83 inosvika ichibvumidza kutumidza madhizaikopu chaiwo uye dzimwe nhau dzakakosha
Makore makumi matatu neLinux. Kuchinja kwakaita zvinhu